Seddax ka mid ah saraakiishii Maxamed Siyaad Barre oo qurbaha ku badbaadi waayay | Qaran News
Writen by Qaran News | 12:09 pm 21st Oct, 2019
Jeneraal Maxamed Cali Samatar
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa sannadkii 2010-kii go’aamisay in dacwad lagu soo oogi karo jenaraal Samatar.
Maxkamad ku taal waddanka Mareykanka ayaa go’aamisay in Janaraal Samatar uu bixiyo lacag lagu ganaaxay taasi oo soo gabagabeyneysay muddo siddeed sano ah oo dacwad ay ku socotay.
Wuxuu dowladdii kacaanka ka ahaa taliyihii guutada shanaad ee milatariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu mas’uul ka ahaa tacaddiyo ka dhan ah bani’aadanimada oo la sheegay in uu ka geystay goboladii waqooyi oo haatan la yiraahdo Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday Somaliland.
Maxamed Xasan Ismaciil
Dhukumantiyo ka soo baxay maxkamd heer federal ayaa muujiyay in Maxamed uu mas’uul ka ahaa jirdil loo geeystay maxaabiis.
Sannadkii 1993-dii , waxaa laga saaray liiska dadka Kanada ay magan-gelyada siisay kadib markii la arkay calaamado muujinayay in uu galay dambiyo ka dhan ah bini’aadanimada.
Inkastoo Kanada ay go’aan ku gaartay in Xasan dalka laga musaafiriyo, haddana dalka lagama saarin.
Mana jirin cadeyn muujinaysa in Maxamed uu dalka ku sii noolaan karo. Si kastaba sannadkii 2011-kii Hay’adda Canada u qaabilsan Xuduudaha ayaa Faarax ku dartay liiska 30 nin oo lagu soo eedeyay in ay galeen dambiyo ka dhan xuquuqda aadanaha.
Xubno ka tirsan Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Canada ayaa walaac xooggan muujiyay kadib markii Maxamed Xasan Ismaciil Faarax loo magacaabay taliyaha booliska dalka Soomaaliya kuwaasi oo ku andacoonayay in ay nasiib darro tahay nin ku jira liiska dambiilayaasha loo magacaabo jago intaa la’eg.